Aluminium ụlọ mposi Nsukka & Suppliers - China Aluminium ụlọ mposi Factory
Ilelọ Mposi Mpobile Portable Topi, Igwe eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri bụ nke ihe eji arụ ọrụ. N'ozuzu, a na-agbanye ígwè na ọwa ma ọ bụ I-beam, a na-ejikwa ígwè rụọ square kọlụm. A na-eji mbadamba ụrọ ndị nwere agba, nchara nchara, igwe anaghị agba nchara, na mbadamba ihe ndị e ji ígwè mee. Toilelọ mposi ndị na-ebugharị ebugharị bụ ibu dị nfe, nke dabara adaba, Ọ dị mma n'ọdịdị. Toilelọ mposi nke Prefab bụ ụlọ ọrụ dị n'ime ime na ngwongwo na-emechi, ebe ịsa ahụ, ọkụ na-ekpochapu,
Mfe ịwụnye ụlọ mposi ọha na-ebugharị EPS Sanwichi merecheap mobile wc mposi ịdị ọcha
Toiletlọ mposi a na-ebugharị ụlọ mposi na-adọkpụ ụlọ mposi na-eri ebe a na-etinye n'èzí, dịka ụzọ obodo, ogige ntụrụndụ, ebe ndị njem nleta, ebe obibi, ụlọ nkwakọba ihe, wdg. Toiletlọ mposi a na-ebugharị ebugharị na-adaba adaba ma ha nwere ike izute mkpa ndị mmadụ kwa ụbọchị .Mgbe ọmarịcha mma, ụlọ ndị gbara ha gburugburu na-adịkwa mma. Size Otu ụlọ: 1.1.1MX1.1MX2.3H Ime ụlọ abụọ: 1.1.1MX2.2MX2.3H Ime ụlọ atọ: 1.1.1MX3.3MX2.3H Style Squat Toilet / Sit ọdụ mposi ...
N'ogbe Cheap Price Portable Chemical mposi Mobile Ibughari Tolọ mposi Cabin Movable Toilets For Sale
Toiletlọ mposi a na-ebugharị ụlọ mposi na-adọkpụ ụlọ mposi na-eri ebe a na-etinye n'èzí, dịka ụzọ obodo, ogige ntụrụndụ, ebe ndị njem nleta, ebe obibi, ụlọ nkwakọba ihe, wdg. Toiletlọ mposi a na-ebugharị ebugharị na-adaba adaba ma ha nwere ike izute mkpa ndị mmadụ kwa ụbọchị .Mgbe ọmarịcha mma, ụlọ ndị gbara ha gburugburu na-adịkwa mma. 2.Details ỌZỌ na agba na ihe ọzọ sonyere ụlọ mposi nwere ike ahaziri. 3.Advantage 1. ahaziri imewe: can nwere ike ch ...